ब्राजील: फल मा एकड, ब्राजिल-भिडियो । कहाँ जाने साओ पाउलो-भिडियो । क्रिसमस मा एकड, ब्राजिल-भिडियो । हरेक पटक म भेट्न संग एक मानिस एक ब्राजिलियन, उहाँले सुरु बारेमा सोधेर मेरो पति — र मानिस कटौती बन्द सिङ. थियो, यो उल्लसित हेर्न आफ्नो भिडियो, बस जस्तै, ब्राजील मा यो हेर्न रोचक विपरीत अवस्था छ । यो छैन पहिलो पटक मैले देखेको छु, यो म सिर्फ सम्झना छैन भने, म यस्तो लेखे टिप्पणी वा छैन । जहाँसम्म मलाई थाहा छ, तपाईं बाँच्न साओ पाउलो मा, हो । पक्षमा मानिसहरूको जीवन को ब्राजील मा धेरै फरक छन् विभिन्न क्षेत्रमा. दक्षिण मा, उदाहरणका लागि, विशेष गरी स्पष्ट र निलो वा हरियो आँखा) वेल्स र संस्कृति पनि हुन सक्छ विभिन्न सिद्धान्त मा. तपाईं के भने, उदाहरणका लागि, व्यक्तिगत मामिलामा. म सुने पहिलो पटक यी प्रश्नहरूको, जस्तै तपाईं कत्तिको कमाउन वा कति छ तपाईं लागि तिर्न भाडा थियो, मान्छे देखि, म शायद थाह थियो ब्राजील मा. पनि ब्राजील मा (कम्तिमा, म कहाँ जन्म भएको थियो), यो विचार छ अभद्र सोध्न यी प्रश्नहरू. र सोध्न उमेर मा, यो विपरीत मा, सामान्य ब्राजिल र ब्राजील मा यो असम्भव छ) मा रंग, म सहमत, तिनीहरूले दिन बढी र अधिक ब्राजिलियन प्रेम) राम्रो काम मा. बेइमान हास्यास्पद, तपाईं भन्न) म यो काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं को लागि र कसरी) सोधे जो तपाईं को लागि आफ्नो तलब छ, पनि छ कि छैन, धेरै भद्र ब्राजील मा, यो व्यक्ति निर्भर, तर भद्र मानिसहरू सामान्यतया छैन भनेर. धन्यवाद।) तपाईं यस्तो लेखे यो टिप्पणी वा कसैले मदत । तिनीहरूले दिनुभयो मा त्रास, एक स्वस्थ जवान महिला । जहाँ के तपाईं कहिल्यै देखेको, यो लेखक । ओह, म पूर्णरूपमा सहमत — मेरो मनपर्ने, त्यो रुन्छिन् पनि अक्सर र कसरी यो मार्मिक छ । धेरै प्यारा छ । तर यो आफ्नो खाली प्रतिज्ञा, पाठ्यक्रम, कम । हुनत म नै बाटो महसुस) को लागि धेरै धन्यवाद यो भिडियो । कृपया हामीलाई भन्नुहोस् भनेर विभिन्न मानिसहरू बस्न विभिन्न ठाउँमा छ । मान्छे को जीवन देखि राज्य को. रोजगार जो — व्यवसाय संग लोकप्रिय पुरुष प्रदान, एक परिवारको लागि, वा काम गर्ने निर्णय र विवाह । यो साधारण धर्म, विशेष गरी क्याथोलिक चर्च, व्यापक छ पछि. पुरुष मात्र थाहा राज्य सेन्ट पावल र कम आफूलाई चामल) विशेष गरी पुरुष प्रस्ताव परिवार, तर विभिन्न परिस्थिति छन्) धन्यवाद, धेरै रोचक भिडियो । म मा बाँच्न राजधानी ब्रासिलिया, पनि यहाँ मैले देखेको छैन यो विशेष प्रकाश, सबै तपाईं भन्न रूपमा, गाढा -तयार गरे कालो र घुम्रेको युक्रेन मा मैले देखेको छैन, यो महिला लागि कहीं, तल पनि गर्भवती महिला छैन सधैं उपज, र सामान्य लागि र वृद्ध मान्छे सबै शान्त छ । लागि बाहेक मार्च । तर सामान्य यहाँ भन्दा राम्रो छ, युक्रेन, र ब्राजील मा, म पनि लाग्छ । मलाई बताउँछ बारेमा, म यो मन कसरी राम्रो ल्याउन कि हाम्रो सही मा फूल, र लगभग मा आफ्नो हात. निकटतम अर्थहीन छ । र हाम्रो र आफ्नो, राम्रो बिहान, म पढ्न को पुच्छ्रेतारा, पनि लेख्न निर्णय, तपाईं पनि राम्रो हेर्न, सुन्न छैन कसैलाई, बोली एक ठूलो तरिका हो, सरल र स्पष्ट, अधिक केही.
नमस्ते । खैर, म यो राखे त प्रतीकात्मक, सबैलाई पेय यति । खैर, यो एक संग तपाईं कसलाई कुराकानी सुरु सधैं प्रदान एक को केही प्रकारको संग एक विशाल भनेर विश्वास गर्न कठिन छ ब्राजील मा छन् अलि. देखि दक्षिणी अमेरिका मा लगभग विशेष आबादी को पोते र ठूलो-नातिनातिनी को आप्रवासी को युरोपेली मूलका (जर्मन, इटालियनहरू, पोर्चुगिज, डंडे, र यूक्रेनियन), सायद त्यहाँ कुनै तिनीहरूमध्ये.
कमजोर र विश्वास गर्न गाह्रो
सुन्न छैन सर्गेई, त्यहाँ छ कुनै खण्डहर, विपरीत मा, जस्तै केही नाक. तर सर्गेई संग एक मस्तिष्क देखि, उहाँले थियो, अभागी छ. कुनै पनि मामला मा, म साँच्चै जस्तै, फिनल्याण्ड र म चाहँदैनन् गर्न छोड । यो धेरै राम्रो छ यहाँ एक सुन्दर देश, सबै मान्छे को लागि विशेष गरी लागि, अशक्त, बालबालिका र वृद्ध । निस्सन्देह, यो यसको आफ्नै समस्या र कमीकमजोरी छ, तर तपाईं यो तुलना संग ब्राजील, यो छ, यी समस्या समस्या छैन । भनेर मात्र कुरा छैन सम्झना यहाँ सूर्य हिउँदमा छ । ब्राजील मा, धेरै: -) उपाख्यान बारेमा मा बसिरहेका घाँस, इटालियनहरू, जर्मन र.
इटालियन सोच्छ: के एक सुन्दर गाई । जर्मन सोच्छ: म आश्चर्य कति यो गाई लागत? तल बस््छ र सोच्छ: म आश्चर्य के भनेर गाई को सोच्छ मलाई । उपाख्यान मा एक ठाँउ छ । म छु यहाँ बस्ने वर्ष को लागि. तर हामी गर्नुभएको विवाह भएको सत्र वर्ष.
त्यो अझै पनि बस्थे रियो डी जनेरियो
मेरो पति छैन जस्तै हेर्न एक तापनि, उहाँले फिनिस. उहाँले देखि मौलिक भिन्न छ, अन्यथा म छैन होला संग बस्थे उहाँलाई यति धेरै वर्ष को लागि. भनेर मात्र कुरा उहाँले विपरीत मा आफ्नो छ भनेर तिनीहरूले विचार फरक छ, तर धेरै बन्द, मानिसहरू चिसो छन्, सुरक्षित, धेरै भावना संग, वा बरु, तिनीहरूले गर्न सक्षम छैनन् भावना व्यक्त. तिनीहरूले छैनन् तिनीहरूले कसरी थाहा गर्न क्षमा र धन्यवाद (व्यक्तिगत). धेरै डाह छ । किन कि तिनीहरूले ध्यान दिएर बन्द गरेर आफ्नो छिमेकी । लागि फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू, राय को बारेमा अन्य मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरूले सधैं चिन्ता कि म तिनीहरूलाई विचार रूपमा छिमेकी, सहकर्मी मा काम, मित्र । म बाँच्न फिनल्याण्ड मा. यहाँ, कुनै एक छ र कुनै एक अप दिन्छ आफ्नो ठाँउ मा सार्वजनिक परिवहन. पुरुष र महिला बराबर हो, कहिलेकाहीं यो देखिन्छ कि महिला कहिलेकाहीं अधिक पहल मा आफ्नो हात छ । यहाँ मान्छे उत्सुक छन्, तिनीहरूले छन् सबै रोचक, तर तिनीहरूले बारे सोध्न कर्मचारी, तिनीहरूले रुचि छैन कुनै यहाँ, र सामान्य मा हस्तक्षेप नगर्नुहोस् अन्य मानिसहरूको जीवन र दिन छैन सल्लाह छन् नभएसम्म तिनीहरूले सोधे, जो आफूलाई म साँच्चै रुचि । फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू हो, जिम्मेवार र समयनिष्ठ छ, जो पनि मेरो स्वाद । म मन पर्यो ब्रस, तिनीहरूले हास्यास्पद र मिलनसार, बियर छ घृणित र छ गर्न लगभग जस्तै बरफ गर्न सक्षम हुन यो पिउन. धन्यवाद । धेरै रोचक विषय हो । म समाचार सुने पनि राष्ट्रपति आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्न घडी को नवीनतम प्रकरण टीभी:-). भने हेर्न ब्राजिलका श्रृंखला छ रूपमा धेरै उनि भन्छन्, र यदि यो आशा ब्राजिल श्रृंखला (.) धेरै प्रसिद्ध ब्राजील मा. अन्य विषयवस्तुहरू: खाना । व्यावसायिक ब्राजिलका महिला । ब्राजिलका समर्थक विद्यालय किनभने, छुट्टी मा छन् (घरमा सप्ताह लागि, बिदाहरू समयमा), यो धेरै रोचक र अनौठो), रुन्छिन् फेंक गर्दा, यस्तै छ जो ब्राजिलका मानक), म बस्ने गरेका छन् थाईल्याण्ड मा तीन वर्ष को लागि र छैन अझै पनि थाहा बारे केहि पुरुषहरु कोठा), बाहेक त्यो औंल्याए कि सबै प्रश्न यहाँ निर्णय बारे महिला, र त्यसैले बिल रेस्टुरेन्ट मा उनको बताउँछ, म तपाईंले सोध्न चाहन्थे, तर मेट्रो क्लब रियो मा छ महिला गरेको कार वा. यहाँ को मेट्रो रिपोर्ट । म के थाहा महिला घटनास्थलमा मा के गर्न चाहन्थे ब्रासिलिया, तर स्थानीय थिए विरोध, तर रियो मा तिनीहरूले अझै पनि अवस्थित । ओह, सर्गेई, त्यहाँ कुनै सट्टेबाजी मा एक घाउ, के तपाईं साँच्चै लाग्छ कि बीस-पाँच वर्ष म कहिल्यै देखेका छौँ दाँत मा एक दर्पण? दुर्भाग्यवश, यो यो महंगा छ, तर म राखे छौँ तिनीहरूलाई रूपमा चाँडै म सक्छन् रूपमा. धन्यवाद तपाईं को लागि देख, तर म सोच्न हुनुपर्छ. जस्तै यो चलचित्र मा, राम्रो (आर्थिक) कुनै अपमान, तर को लागि प्रतीक्षा गर्दै छन्, तपाईं पनि, जब तपाईं बारेमा कुरा गर्न प्रयास लुकाउन आफ्नो दाँत मा आफ्नो ओठ, बस केही वर्ष संग जान र तिनीहरूलाई सबै राम्रो पक्ष गएका छन्, तर तिनीहरूले बताउन सक्नुहुन्छ, तपाईं सही आफ्नो अनुहार — तपाईं छौं त बोसो । जिम जान रोक्न, खाने मिठाई, आदि. (परिचित मान्छे) फ्रान्सेली धेरै त्यस्तै हो ब्रस). यो स्पष्ट छ कि केवल को इलाका मा पूर्व सोभियत संघ, यो अझै पनि एक सानो टापु को साहस हुनत, यो साहस बन्ने छ झन् दुर्लभ छ । र एक दया ।
← दस कदम गाइड संग सेक्स भएको मेक्सिकन - यो समस्या
फ्री अनलाइन अध्ययन गाइड पोर्चुगिज ब्राजिलियन ब्राजिल आज →